Akụkọ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Mkpụrụ vaịn Burdaka AV: ụdị kacha mma, ndụmọdụ maka nlekọta na akuku
Ịchọta oke ókè nke izu okè mmadụ fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume. A sị ka e kwuwe, anyị na-agbalị mgbe niile iji mee ka ọ bụghị naanị anyị, mana ihe niile gbara anyị gburugburu. Ikekwe, ihe kachasị na-aga ọdịdị, nke anyị mụtara ịchịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ osisi. Nhọrọ na nghazi a emetụwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ "ezinụlọ" nke a na-akọ, na karịsịa mkpụrụ vaịn, ihe ubi nke dị ọtụtụ puku afọ.
10 iwu dị mkpa maka na-eto eto tomato
Ndị na-akọ ubi nwere ahụmahụ nwere usoro ntụziaka ha maka ịmalite tomato na-eto eto, ihe niile dị iche iche. N'agbanyegh i ot 'ui si ekesa ihe nd ia, onye ob ula ga-enweta ihe oh ur u n'aka ha n'agbanyegh i mmeri ha. Atụmatụ dị n'okpuru ga-abụ ọnọdụ ọhụrụ maka ezigbo nsonaazụ. Ije ije na ụzọ dị mfe ma bụrụ nke a zọchara ụkwụ, ọbụna onye na-amalite ga-enweta ezigbo nsonaazụ.
10 osisi na-ewu ewu maka ụlọ obibi
Nnukwu ụlọ dị n'ime ụlọ ahụ na-eme ka ọ dị mfe itinye nnukwu ọnụ ụlọ osisi n'ime ya. Kedu ụdị ndị nnọchianya nke osisi ahụ a na-apụghị ịchọta n'ime ime ụlọ fatịlaịza. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ na nkwụ ndị a na-achọ, na dracaena dị elu na osisi ndị ọzọ ndị ọzọ na ndị nwe ha echeghị na ọ dị mkpa ka ha tinye n'ime ụlọ ndị ọzọ.
Atụmatụ 10 maka ndị na-akọ umengwụ ma ọ bụ otu esi eme ka ebe obibi dị jụụ?
Ugboro ole ka ọ na-eme mgbe ị na-abata n'ụlọ ahụ iji zuru ike ma dị ka a rụpụtara, ụbọchị niile n'ahịrị na ị na-eme ụfọdụ azụmahịa na ọgba aghara na ubi? Ọtụtụ na-enwe nsogbu yiri nke a, ọ bụ ezie na mba a ga-achọ ka m zuru ike ma nwee udo. Ọzọ, anyị na-atụle aro ndị nwere ike inye aka imeziwanye ma gbanwee ụlọ gị iji nwee ohere a maka ntụrụndụ.
12 echiche maka ndokwa a mma n'akụkụ na ụlọ gị
Ụlọ gị ọ na-enweghị ebe dị mma iji zuru ike, ma ọ bụ ị kpebiri ịnye saịtị ahụ dị ugbu a ọmarịcha ọhụrụ? Anyị na-enye gị ịmara ihe ndị na-adọrọ mmasị, ekele nke ndị niile na-ewepụ oge, ego na mgbalị. Ihe ga-esi na ya pụta ga-adị ukwuu - ọbụna akụkụ kachasị agbahapụ, nke ị na-ewereghị dị ka ebe bara uru, nwere ike ịbụ ebe dị mma maka ntụrụndụ.
6 ọtụtụ echiche ezighi ezi banyere ụlọ na nkwadebe nke Roses maka oyi
Mgbe na-eto eto Roses n'etiti etiti na mgbụsị akwụkwọ, ọ dị mkpa iji dozie okooko osisi a maka oyi. Ma a ghaghị ime nke a n'ụzọ ziri ezi dị ka o kwere mee, na-agbaso ndụmọdụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-emekarị ihe ọjọọ. Ndị mmadụ na-eduhie ndị mmadụ site na akụkọ ifo kachasị dị iche iche banyere ịkwadebe Roses maka oge oyi.
10 nzuzo nke pickled na pickled cucumbers
Na tebụl oriri, pickled cucumber na-eburu ebe kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ ndị nwunye nwunye na-achọpụta na ịkwadebe akwụkwọ nri n'oge okpomọkụ dị mfe, mana ọtụtụ echiche a na-agwụsị. Ya mere, ọ bara uru ịmata ihe nzuzo dị irè. Iwu maka nhọrọ nke akwụkwọ nri Lezienụ anya na iche iche. Na-amasịkarị, Nezhinsky, Ọsọ, Murom, Nosovsky, Era, Stage, Cascade, Voronezhsky, Altai, Beregovoi, Avangard, Vyaznikovsky 37 na-abụkarị maka salting.
Ụdị 5 ọgwụgwọ dị mma ma ọ bụ otu esi ahapụ nchegbu niile n'ọnụ ụzọ ámá ahụ?
Nye ọtụtụ ndị, ezumike ezumike na-adọrọ mmasị ma bara uru ọbụna karịa ụlọ ọrụ ahụ. A sị ka e kwuwe, na ebe ị na-anọkarị na mba ọzọ, na n'ụlọ gị, ị na-enwekwu obi ụtọ karị. Ọzọkwa, e nwere ụzọ ndị na-enye gị ohere ime (ma mee) site n'ubi nke gị ka ọ bụrụ ebe okike ma na-agwọ ọrịa.
7 osisi kachasị mma maka ogige gị
Ịbịa mba ahụ site na obodo dara oyi mgbe izu ụka gasị dị ụtọ ma ọ bụrụ na ikuku jupụtara na aromas mara mma nke osisi osisi. Mmanụ ísì dị iche iche ga-arụ ọrụ aromatherapy, nyere gị aka izuike, ga-ebuli mmụọ gị, mee ka ọdịmma gị dịkwuo mma. Mgbe okooko osisi, ọtụtụ osisi na-etinye mmanụ dị oké mkpa nke nwere ísì uto.
N'ọgba ogige nke aka gị, i nwere ike ime mkpebi dị iche iche. Mkpebi ndị a nwere ike ịbụ ndị gụrụ akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ, na n'agbanyeghị ahụmahụ, ha abụọ nwere ike ime. Ya mere, ịchọta amaokwu ndị na-enweghị isi nke a ga-anabata bụ ihe dị mkpa ma maka onye mbido na onye ọrụ ahụ nwere ahụmahụ.
Kedu ihe bụ pergola na ihe mere o ji dị mkpa na saịtị ahụ?
Pergola - ụlọ ụlọ a pụrụ iche. Enwere okwu a n'asụsụ Italian, ebe ọ pụtara "mgbatị" ma ọ bụ "mkpuchi". Enwere ike ịme ka ụlọ dị iche ma ọ bụ dịka mgbatị na ụlọ (dịka ọmụmaatụ, ụlọ ma ọ bụ kichin okpomọkụ). Pergola - ihe dị n'agbata nkwado nhazi maka climbers na ogige ọhịa.
Nsogbu mpaghara imewe: mkpọda
Maka ihe ka ukwuu, ndị nwe ụlọ nhazi oge a natara ala ndị a n'oge nkesa ọbụna n'oge Soviet Union. Na oge ochie, ndị mmadụ enwechaghị mmasị na ala ndị kachasị mma, n'ihi na ọtụtụ n'ime ha na-enye nhọrọ ndị na-adịghị enweta maka ịkọ ubi na mkpa ndị ọzọ dị n'ubi. Site na ebe a, ọtụtụ saịtị dị iche iche na-apụtaghị nke a na-emeghị nke ọma ma nwee ebe dịgasị iche na elu.
Ihe ndị bụ isi nke ịmepụta acha
Na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ iji mee ihe niile ndị na-atụ anya ya ga-achọ, ga-achọ ka ha nwee ike ime ya. Nke a bụ ebe anyị chọrọ ịla ezumike site na obodo a na-eme mkpọtụ, na-arụ ọrụ n'ime ubi na n'elu akwa ogige. Kedu ka esi kwadebe ala gị, nke mere na ihe niile dị mma, ihe ziri ezi ma dị mma? Nke a bụ ụdị sayensị ụfọdụ.
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị nwe obodo ga-achọ inwe ihe nkiri alpine dị egwu na atụmatụ ha. N'ụzọ dị mwute, nrọ a mara mma bụ otu n'ime ihe kachasị ọnụ ahịa, n'ihi ya, a naghị aghọta ya. Ma ndị hụrụ ọdịdị mbara ala na-ejiri nkume ndị dị mkpa ekwesịghị ịda mbà na ịkwụsị ọchịchọ ịchọta ebe ị na-achọ - na mgbakwunye na ihe nkiri alpine ndị a na-ahụkarị ọtụtụ ubi ndị ọzọ dị na nkume, ọ bụghị obere ihe dị egwu, kama ọ bụ ihe ndị ọzọ na-efu.
Kporo kukumba "na agwa" ma ọ bụ na-eto Momordica
Taa, anyị na-ele anya n'otu osisi dị ezigbo egwu. O nwere ọtụtụ ihe bara uru, ihe uto pụrụ iche, a na-akpọ ya "Gourd dị ilu Chinese". A maara ọtụtụ n'ime ya n'okpuru aha omimi ahụ bụ "Momordika". Na nso nso banyere osisi Momordica, n'eziokwu, bụ aha n'ozuzu maka osisi buru ibu - nke a na-eme kwa afọ.
Nri na mba: ofe Dovga
Mkpụrụ vaịn dị iche iche bụ akụkụ na-adọrọ mmasị nke ọdịnala anụ ọhịa. Na Russia, ọtụtụ ndị maara ụra okroshka na bekee beetroot, na Bulgaria soups na kefir. Ntụziaka maka Dovgi bụ naanị kefir ofe, mana ọ bụghị nanị na nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị na ya, kamakwa ohere ịme nri n'oge ọ bụla n'afọ. E kwuwerị, ihe ndị a na-eme mgbe nile dị.
Kedu ka esi esi nweta nwatakiri n 'obodo?
Obi - ebe magburu onwe ya! Mụ na ndị okenye na-enwe mmasị na ọdịdị na ụmụ anyị. Nke mere ka ha ghara ịda mbà, anyị na-enye ọtụtụ echiche ndị ga-eme ka ndị ọzọ na-eto eto nke ezinụlọ gị na-atọ ụtọ karị. Onye na-eto eto na-eto eto Na-emekarị, ọ naghị esiri ndị okenye ike inyefe nwa obere obere ala ahụ n'ubi ahụ. Nye ya ngwá ọrụ dị mma, na-enye mkpụrụ nke mkpụrụ osisi na-elekọta ndị dị mfe, na-echetara gị oge ịgha na ịgbara mmiri.
Anyị na-akwadebe akwa maka afọ na-esote: kedu na ebee ga-akụ?
Otu n'ime isi nchegbu nke ndị na-elekọta ubi na ọdịda bụ mkpa ịkọ atụmatụ ga-eme n'afọ ọzọ na ebe ọ ga-eto. Site na ihe ndina e zubere maka cucumbers, nke - maka kabeeji, ga-adabere, dịka ọmụmaatụ, njikọ fatịlaịza na ọdịda ma ọ bụ n'oge okpomọkụ nke garlic na eyịm. Ka anyị leba anya n'otú anyị ga-esi chee echiche site na ntụgharị ihe ọkụkụ ahụ.
Ihe ntanetịka Miracle Berry: Ọ ga-eme ka o too na okpokoro okpomọkụ n'oge etiti?
Mkpụrụ pọmigranet bụ nnukwu nnukwu berry nke na-etolite n'ala ndị na-ekpo ọkụ ma na-amalite n'oge mgbede. A na-ewere ya dị ka ihe nnọchianya nke ọmụmụ, nke a bụghị ihe mgbagwoju anya: e nwere ọtụtụ narị obere grains n'okpuru akpụkpọ anụ ahụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ pọmigranet bụ osisi ọkụ na-ahụ ọkụ, ọtụtụ ndị chọrọ ịnwale aka ha ma too ọrụ ebube a na beri na Russia.
Ide maka azụmahịa nke onwe: ire ere ngwaahịa na gburugburu ebe obibi
Ugbu a, ndị mmadụ na-aghọta na iji ọgwụ ndị na-abụghị ihe okike na-emerụ ahụ ike ha. Dịka ọmụmaatụ, n'elu ụlọ ahịa ị nwere ike ịchọta ihe ọkụkụ, nkwalite flavor, flavors. Ọ bụ ya mere n'oge a, ọha mmadụ na-anwa ịzụta ngwaahịa. Kedu nkwa nke azụmahịa a na Russia?
Idebe maka azụmahịa gị: mmepụta nke akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi oyi
Echiche ụgha na e nweghị vitamin na mmanụ ndị ọzọ bara uru na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri oyi kpọnwụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 gara aga. Nke a na-ekere òkè dị ukwuu n'ịzụlite azụmahịa na ntụziaka a. N'ime afọ 90, ndị ọrụ ala ọzọ na-ejide ndị ndú na usoro nke inye ngwaahịa ndị a n'ókèala nke Russia. Ka oge na-aga, òkè nke ngwaahịa dị iche iche na ngwaahịa ndị na-ekpo ọkụ nke ọdịdị dị na Russia na-arịwanye elu nke ndị na-emepụta ụlọ.
Raspberry "Diamond": àgwà, cultivation agrotechnology
Ihe iji esi nri site na plum maka oge oyi: ihe kachasị mma
Ntuziaka maka ndị na-ahụ maka orchid: otu esi abawanye na ụlọ site na stalk stalk. Ụkpụrụ nhazi na aro
Hens, nke enweghị nha - Yurlovskie Elu
Zinnia: esi eto osisi ifuru site na usoro seedling
Otu esi esi na-eme ka radishes na oge opupu ihe ubi na griin ha na ma n'enweghi kpochapu - ndi ndu ubi
Ọ ga-ekwe omume ịzụlite rabbits na pasili